तपाईंको अाजको दिन कस्तो छ हेर्नुस् : २०७६ साल जेठ ६ गतेको राशिफल — ''समर्पण मिडिया''
६, जेठ २०७६
तपाईंले सकारात्मक दृष्टिकोण र विश्वासले आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना छ। लगानीको लागि सिफारिस गरिन्छ तर उचित सल्लाह लिनु आवश्यक छ। परिवारमा भएको समारोहमा नयाँ मित्र बनाउनु हुनेछ। तर चयन गर्दा सावधान हुनुहोस्। असल मित्रहरू तपाईंले सधैं संरक्षण गर्न चाहनुहुने धन जस्तै हुन्। आफ्नो जीवनसाथीसँग बाहिर जाँदा राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। रचनात्मक र तपाइँको झैं समान विचार राख्ने मान्छेसँग हात मिलाउनुहोस्। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। आफ्नो जन्मदिन बिर्सेको वा केही अन्य कुरा बिर्सेको जस्ता साधारण कुरामा आफ्नो जोडीसित पुरानो मुद्दामा आज तपाईं भिड्न सक्नु हुन्छ। तर, सबै कुरा दिनको अन्तमा ठीक हुनेछ।
आज तपाईं तनाउमुक्त महसुस गर्नुहुनेछ र रमाइलो गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ – जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेशको लागि राम्रो समय। प्रेममा मग्न भएकाहरूले प्रेमको संगीत सबै समय सुन्दछन्। आज तपाईंले यो संसारका सबै गीतहरू भूल्ने त्यो संगीत सुन्नु हुनेछ। अझै पनि कामको खिचलोले तपाईंको मन बेह्रेको छ र परिवार र साथीहरूको लागि कुनै पनि समय निस्किन सकेको छैन। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। तपाईंको आजको दिन आफ्ना जीवनसाथीसँग प्रेम, चुम्बन, अंकमाल, र मजा गरेर रोमान्समा बित्नेछ।
कुनै संत झैं व्यक्तिको आशिषले मनोशान्ति दिनेछ। आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् – र आज आवश्यक वस्तुहरू मात्र किन्नुहोस्। तपाईंको आकर्षक प्रकृति र सुखद व्यक्तित्वले तपाईंलाई नयाँ मित्र बनाउन र सम्पर्क सुधार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। आज प्रेमको परमानन्दमा तपाईंको सपना र वास्तविकताको मिश्रण हुनेछ। साझेदारीको अवसर राम्रो देखिन्छ, तर लाभ राम्रो हुने छैन। कसै कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण हुनेछ। आज जीवन साँच्चै सुन्दर हुन गइरहको छ, किनभने तपाईंको जोडीले कही विशेष कुराको योजना गरेको छ।
आज तपाईंले धेरै खिचलो र फरक विचारहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जसले तपाईंले रिस उठ्ने र अप्ठ्यारो गर्नेछ। आर्थिक सुधार भएमा तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण खरीद गर्नको लागि सुविधा हुनेछ। आफैलाई ज्यादै पुलपुल्याउने र सबैभन्दा आनन्द आउने कुराहरू गर्नको लागि राम्रो दिन। कार्डमा कसैले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि परीक्षा दिनेहरूले आफुलाई शान्त राख्नु आवश्यक छ। परीक्षाको डरले तपाईं सताओस। तपाईंको प्रयासले निश्चित सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ। समस्याको शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताले तपाईंको पहिचान बनाउनेछ। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
अप्रत्याशित यात्रा गलाउने हुन सक्छ जसले तपाईंलाई उन्मादमा पार्न सक्छ। मांसपेशीलाई राहत दिन तेलले आफ्नो शरीर मालिश गर्नुहोस्। आर्थिकमा सुधार आउनाले तपाईंलाई अत्यावश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न सुविधा हुनेछ। घरमा छोराछोरीले अनुपात बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न गरेर तपाईंलाई समस्यामा पार्नेछन् – कुनै पनि कदम चाल्नु अघि तथ्य प्रमाणित गर्नुहोस्। एउटा आश्चर्यको सन्देशले तपाईंलाई राम्रो सपना दिनेछ। केही समयको लागि तपाईं एक्लै हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ – सहकर्मी / साथीहरू तपाईंको सहायता गर्न आउन सक्छन् – तर धेरै सहयोग प्रदान गर्न सक्षम हुने छैनन्। यात्रा र शैक्षिक गतिविधिहरूले तपाईंको जागरूकतामा बृद्धि गर्नेछ। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
बच्चाहरुसँग खेल्नाले तपाईंलाई धेरै शान्तिको अनुभव हुनेछ। तपाईंले कमीशन – लाभांश – वा रोयल्टीहरूबाट लाभ प्राप्त गर्नु हुनेछ। तपाईंको काममा दबाव कम हुने र परिवारका सदस्यहरूसँग समय काट्ने उचित दिन। तपाईंको कार्डमा तलाउमा सुन्दर बास भेट्ने सम्भावना उँचो छ। तपाईंका सहकर्मीले कामको समय पछि सानो भेलाको लागि आमन्त्रण गर्न सक्छन्। यात्रा सुखद र अत्यधिक लाभदायक हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो जोडीले विशेष ध्यान दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
बाहिरी खेलहरूले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछन् – ध्यान र योग लाभदायक हुनेछन्। आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धिले तपाईंको मनमा शान्ति हुनेछैन। साँझको लागि रोमाञ्चक योजना राखेर तपाईंका मित्रहरूले तपाईँको दिन रोशन गर्नेछन्। यस दिन तपाईं वरिपरि गुलाबको खुशबू हुनेछ। प्रेमका परमानन्दको आनन्द लिनुहोस्। व्याङ्किङ्ग क्षेत्रका पेशावरहरूलाई राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। कसैको लागि कार्डमा पदोन्नतिको सम्भावना ऊँचो छ। आनन्दलाई दुइ गुणा बढाउन तपाईंले सहकर्मीसँग आफ्नो खुशी बाँट्न सक्नुहुन्छ। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। आज तपाईंले गुलाब झन रातो र नील लोहित झन नीलो देख्नुहुनेछ किनकि प्रेमको नशाले तपाईंलाई माथि पुर्याएको छ।
आराम महत्त्वपूर्ण भएको दिन – हालैमा तपाईंले धेरै मानसिक दबाबको सामना गर्नुभएको छ – त्यसैले मनोरञ्जन र आमोद-प्रमोदले तपाईंलाई आराम गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस् – कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्। बच्चाहरुले अझ बढी हेरविचारको माग गर्नेछन् – तर तिनीहरूले सहयोगी र मायालु व्यवहार गर्नेछन्। कसैले तपाईंलाई प्रेममा धोखा दिन सक्छ, होसियार हुनुहोस्। तपाईंले अरूको सहयोग बिना महत्त्वपूर्ण कामहरू संचालन गर्न सक्छु भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईंले ठूलो गल्ती गर्नुहुँदैछ। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। आफ्नो जोडीले तपाईंको कुनै योजना वा परियोजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ; धैर्य नगुमाउनुहोस्।
यदि तपाईं विगतका घटनाहरूको याद गर्नुभयो भने – तपाईंको निराशाले आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ – सकेसम्म धेरै आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्। आफ्नो घरको वरिपरि केही सफाईको तुरुन्तै आवश्यकता छ। आफ्नो प्रिय वा जोडीबाट राम्रो सञ्चार वा सन्देशले आज तपाईंको हौसलामा बृद्धि गर्नेछ। कामको कुरा राम्रो देखिन्छ। तपाईंको मुड दिनैभरि राम्रो रहनेछ। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
आजको मनोरञ्जनमा खेल गतिविधिहरु र घर बाहिरका कार्यहरू समावेश हुनुपर्छ। तपाईं यात्रा र पैसा खर्च गर्ने मुडमा हुनुहुनेछ – तर त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं पछुताउनु हुनेछ। तपाईंले चाहनुभएको सबै ध्यान प्राप्त गर्नुहुने आज राम्रो दिन छ – तपाईंले धेरै कुराहरू लहरै पाउनुहुनेछ र तपाईंलाई के चाहिं लिनु हो भन्ने निर्णय लिन समस्या पर्नेछ। तपाईं रोमान्टिक विचार र विगतका सपनाहरूमा हराउनु हुनेछ। तपाईं प्रमुख जमीनको सम्झौता राख्ने र मनोरञ्जन परियोजनामा धेरै मान्छे समन्वय गर्ने स्थितिमा हुनुहुनेछ। यात्रा र शैक्षिक गतिविधिहरूले तपाईंको जागरूकतामा बृद्धि गर्नेछ। विवाह यौनको लागि मात्रै हो भनेर भन्नेहरूले ढाँट्छन्। किनभने, आज तपाईंलाई साँचो प्रेम के हो भन्ने थाहा हुनेछ।
खानाको आफ्नो स्वाद नुनको बलले हुन्छ – केही दुख जरूरी हुन्छ अनि मात्र तपाईंले आनन्दको मूल्य महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईंले केही अतिरिक्त पैसा बनाउने तरिकाहरू खोजिरहनु भएको छ भने सुरक्षित वित्तीय योजनाहरुमा लगानी गर्नुहोस्। परिवारको भेलामा तपाईं सबैको केन्द्रविन्दु हुनुहुनेछ। नयाँ प्रेम जडान गठन गर्ने सम्भावना बलियो हुनेछ तर व्यक्तिगत र गोप्य जानकारी प्रकट नगर्नुहोस्। नयाँ ग्राहकहरुसँग बातचीत गर्ने यो एउटा अद्भुत दिन हो। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। आज आफ्नो जीवन साथीले भर्खरै भएका नराम्रा घटनाहरूको बिर्सेर तपाईंलाई सबै राम्रो भावना प्रकट गरेर देखाउनेछन्।
एउटा मित्रको नराम्रो व्यवहारले तपाईंलाई अपमान महसुस हुन सक्छ। तर आफुलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंलाई यसले दुःख नदेओस भन्नको लागि बरू जोगिने प्रयास गर्नुहोस्। धेरै स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग केही तनाउमुक्त समय बिताउनुहोस्। प्रेममय जीवन जीवन्त हुनेछ। तपाईंले कठिन जस्ता देखिने समस्याहरूको हल गर्न आफ्ना सम्पर्कमा भएका मान्छेहरूको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीर